Mbola ao anatin’ny volana Jona ankalazana ny “iray volan’ny teny malagasy” isika amin’izao fotoana izao. 24 juin 2020
Isan’ireo azo anandratana izay teny malagasy izay ny kabary satria tsy voafehin-tsisin-tany intsony izany ankehitriny fa efa mielipatrana hatrany ivelany.
Ho an’ny eto an-toerana manokana, maro ny mbola mandalina sy mitrandraka azy ity. Misy koa anefa ireo azo ambara ho “nandova” satria efa nisy nialoha lalana azy ny fianakaviana. Azo lazaina ho “nandova” i Tahirisoa Justin araka izao resaka nifanaovana taminy izao.